UKhanani Inja, umqaphi ongcono kunabo bonke emhlabeni | Izinja Zomhlaba
UKhanani Inja, umqaphi ongcono kunabo bonke
El Inja yaseKhanani Kuwuhlobo loboya obuncane obungaziwa, kepha siyethemba ukuthi kancane kancane luzoduma kakhulu ngoba lunamehlo okwenza uthandane. Zimnandi kangangokuba kulula ukuthi imizwa yethu yokuzivikela ivuke futhi sifuna ukubanikeza impilo engcono kakhulu.
Ngesifiso esikhulu sokugijima kepha, ngaphezu kwakho konke, ukuthandwa, inja yaseKhanani isilwane esingakholeki esizothokozisa noma yimuphi umndeni onganikela ngesikhathi esiningi kuso. Dare ukumazi.
1 Umsuka nomlando weNja yaseKhanani
3 Ukuziphatha kwenja yaseKhanani nobuntu
4 Ukunakekelwa kwezinja zaseKhanani
6 Izithombe Zezinja ZaseKhanani
Umsuka nomlando weNja yaseKhanani
Inja yaseKhanani uhlobo lwasendulo oluvela eMiddle East, lapho ayesetshenziswa khona ngama-Israyeli ukuvikela nokuqapha imihlambi yezimvu kuze kube sekhulwini lesibili leminyaka, lapho amaRoma eyihlakaza. Njengoba inani lamaHeberu lancipha, izinja zafuna isiphephelo ehlane laseNegev, okuyisilwane sasendle sakwa-Israyeli.
Lapho, bakwazi ukuzisindisa ekuqothulweni, kodwa kwaba nenkinga: ngokulahlekelwa ukuxhumana nabantu baba "abanonya", abazimele, benza konke okusemandleni abo ukuzitholela ukudla nabathandekayo babo. Kepha lokho kancane kancane kwakuguquka, kulungile ukusinda ezinye zazo zazihlala eduze nezizwe zamaBedouin futhi zivikela nemihlambi namasimu.
Ngesikhathi sama-1930 izindawo zababaleki zabantu bakwa-Israyeli zazidinga inja yokugada, ezingasinda ezimeni ezinzima. Nakulokhu futhi, inja yaseKhanani yayingaphinda ibe ngumngane obalulekile kubantu. Namuhla kubhekwa njengenja evikelayo yezizwe zamaBedouin futhi, ngaphezu kwalokho, iyinja kazwelonke yakwa-Israyeli.
Inja yaseKhanani iyinja esezingeni eliphakathi nendawo. Abesilisa banesisindo esiphakathi kuka-18 no-25kg nesilinganiso esiphakathi kuka-50 no-60cm, bese kuthi abesifazane babe nesisindo esiphakathi kuka-16 no-19kg nobude obuphakathi kuka-45 no-50cm. Ikhanda limise okwekhanda, linezindlebe eziqondile namathiphu ayindilinga. Umzimba uqinile, uvikelekile ngengubo yangaphandle eminyene, eqinile futhi enobude obuphakathi, nengubo yangaphakathi engaba yinhle noma iphrofethe kuye ngesizini. Umbala ungaba yimuphi umthunzi onsundu noma obomvu, omnyama, ukhilimu, onamabala amancane amhlophe, noma omhlophe onamabala ombala.
Inesikhathi sokuphila cishe iminyaka 14.
Ukuziphatha kwenja yaseKhanani nobuntu
I-protagonist yethu akuyona inja yanoma ngubani. Sola kakhulu abantu ongabazi, futhi ibuye ibe namandla okuphila okusinda kakhulu. Akunalo ulakaKepha uzokhonkotha abathandekayo bakhe ngokushesha lapho ezwa ukuthi kunengozi, kubo nakubo uqobo.
Kokunye, kuyinja lokho kukhona ukuhlinzeka ngemidlalo nokuzijabulisa okuningi, hhayi ukuvivinya umzimba kuphela kepha nokuzivocavoca kwengqondo. Uyakwenyanya ukuzivocavoca okuphindaphindwayo, futhi uma ethola okuthile okuthakazelisa kakhulu ukukwenza, ngokungangabazeki uzokwenza, angamnaki umuntu wakhe. Noma kunjalo, kuyinja lokho uzwana kahle ngokumangalisayo nezingane zomndeni, futhi ngomsebenzi omuhle nokubekezela okuningi ungaba umngane omuhle.
Ukunakekelwa kwezinja zaseKhanani
Inja yokuzala yaseKhanani yisilwane okufanele usondle ngokudla okwenziwe ikakhulukazi ngenyama kanye / noma nenhlanzi. Uma ukwazi, kungcono ukumnikeza ukudla kweBarf, kodwa kunconywa kakhulu ukuthi ubonane nodokotela wezilwane wezilwane ukuze aqiniseke ukuthi akalahlekelwa yilutho.
Okunye okuhle kakhulu kuBarf yiYum Diet, ebukeka njengenyama egayiwe kepha inakho konke okudingwa yinja yakho. Kepha kunjalo okuphakelayo kwamahhala okusanhlamvu.
Njengoba enezinwele ezimfushane, kuzokwanela uma uyikama njalo kanye ngesonto. Futhi, uma ubona ukuthi ingcola kakhulu ungayigeza, kepha ungakwenzi kaningi. Eqinisweni, ungageza kanye kuphela ngenyanga ukuqinisekisa ukuthi isikhumba sakho sihlala siphilile ngokuphelele.
Luhlobo olufanele lwabantu abakhuthele, kusukela uyayithanda imidlalo. Ukuphuma nsuku zonke uhambe, uyohlola umhlaba ongaphezu kwekhaya lakho, kuzokukwenza uzizwe umuhle, ikakhulukazi uma unethuba lokuzulazula, ngokwesibonelo, ipaki yenja.
Ukuba ngumjaho wasendulo, ongazange "usetshenziswe" ngabantu, kunempilo enhle kakhulu. Noma kunjalo, kufanele sikwazi lokho Kufanele sinikeze konke ukunakekelwa okudingayo ukuze uphile iminyaka eminingi ejabulisayo. Ngaphezu kwalokho, i-furry kumele ithole eyayo ukugoma, futhi i-microchip kufanele ifakwe. Lesi sakamuva siyimpoqo emazweni ahlukahlukene, njengeSpain.
Ikakhulu ngoba akusilo uhlobo olwaziwa kakhulu okwamanje, lapho imidlwane iyathengiswa imvamisa inamanani aphezulu, ezungeze i- 1000-1200 ama-euro.
Izithombe Zezinja ZaseKhanani
Uma ufuna ukujabulela izithombe eziningi zenja yaseKhanani, nakhu okunye:
Isithombe - Reliccanaandogs.com
Isithombe - Pets4home.co.uk
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izinja zizala » UKhanani Inja, umqaphi ongcono kunabo bonke
Siyajabula ukuthi uyithandile. Ngikufisela okuhle.
Irbi Jimenez kusho
Sawubona, ngingu-irbi, woza ntambama, nginenja ye-canan, ngivela e-El Salvador futhi ngijabule ngekhala, uma kukuhle engikunike yena ukuba adle inkukhu moadojas igado kanye ne-chorizo ​​futhi doog chawuer inkukhu yamaphiko isobho kaningi kepha ngihlala ngimvusela amaTortias unonyaka nezinyanga eziyi-7 futhi ngiyayithanda le rasa is super
Phendula u-Irbi jimenez
I-Chihuahua, inja encane kunazo zonke emhlabeni
Inja enhle kakhulu yaseTibetan Terrier